Maqaal:Sarara-weyne iyo Hargeysa Maxay ku kala Duwan yihiin.
Laascaanood,Somalia,07 December 2003 �Sida aynu lawada socono waxaa baryahanba ka jiray gobolada waqooyi ee Soomaaliya dhacdooyin badan oo ku saabsan dad la qabqabtay, oo ka kala dhacay goobaha kala ah Hargaysa iyo tuulada lagu maga caabo Sarara-weyne oo ku dhacda galbeedka Magaalo Madaxda Gobolka Cayn ee Buuhoodle.
Haddaba dhacdooyinkani waakuwo caynkee ah, Hadii aynu ugu horayn soo qaadano dhacdadan ugu danbaysay ee ka dhacday tuulada Sarara-Weyne, waxay ahayd mid loogu hiilinaayey dad Soomaaliyeed oo ay ciidamada Dawlada Itoobiya ku dhibaataynayeen iyaga iyo hantidoodaba, waxayna ka bilaabmatay sida la xaqiijiyey gaadhi uu leeyahay nin u dhashay qabiilka Habar jeclo ee Isaaqa oo abti loo yahay , ka dib markii uu muusanaabay , isaga oo ku dhawaaqaya (waryaa Muslin- aheey).
Kadibna ay dadkii deegaankaa ku noolaa oo iyagu ka soo jeeda qabiilka Dhulbahantaha ee Daarood ,ay is hayn kari waayeen, una gurmadeen gaadhigii iyo wiilkii ay abtiga u ahaayeen, halkaasna ay ku dileen afar askari oo itoobiyaan ah,hantidiina ay ka dhiciyeen cadawga.
Ciidamada Itoobiyaanka ahi iyaga oo arrintaa ka cadhaysana ay maalintii danbe dileen laba qof oo rayid ah oo iyagu ka soo jeeda dadka deegaanka u dhashay, haatana ay gacanta ugu jiraan oo ay u xidhan yihiin labaatan qof oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal, kuna xidhan yihiin magaalada wardheer.
Dhanka kale waxaa beryahaanba ay wadeen taageerayaasha Somaliland iyo ragii u shaqaynayey maamulkaas oo beryahaanba ku sugnaa magaalada diyaar garoow ay u diyaar garoobayaan soo dhoweynta Riyaale iyo weftigiisa,waxaa magaalada laga dareemayey inay soo gashay lacag aad u fara badan oo ay keeneen nimankaasi,waxaana loo diyaariyey guryo dhowr ah oo si fiican loo qurxiyey,guryahaasoo ay ku soo degi doonaan inta ay hawshooda ka fushanayaan.
Maxaa haddaba Hargeysana ka dhacay?!hargeysa waxaa ka dhacay sadex dhacdo oo mid waliba tan kale ka daran tahay oo intaba lagula kacay dad Soomaaliyeed oo loogu gacan galiyey ciidamada amxaarada, sannadihii 1996-2002 iyo sannadkan aynu ku jirnee 2003 oo ay dadbadani jeelasha Hargeysa ku jiraan sugayaana sidii gacanta loogu gelin lahaa ciidamada Itoobiyaanka , iyaga oo lagu soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin xoogaga mucaarka ee ka soo horjeeda dawlada Itoobiya, kana ah xubno ururka ONLF,kana soo jeeda dhamaantood qabiilka Absame(Daarood) .
Kuwii sannadihii hore gacanta lagu dhigayna dhamaantood dawlada Itoobiya gacanta loo galiyey, waxaana la xaqiijiyey in ay dadkani ahaayeen dad maato ah, oo dad ay qaraabo yihiin ugu yimi hargeysa si ay ula noolaadaan, sida aynu ognahayn dadka Soomaaliyeed gaar ahaana beelaha deegaan wadaaga lihi waxay had iyo jeer wadaagaan ehelnnimo iyo qaraabo aad isugu dhow.
Waxaana hubaal ah , dadka in-dheer garadka ah ee reer Hargeysa in ay ka xun yihiin falalkan ay ku kacayaan hogaamadii kala danbeeyey ee soo maray maamulka iskii isu magacaabay ee Somaliland, sida Alla ha unaxariistee Maxmed Xaaji Ibraahim Cigaal, iyo Riyaale Kaahin, oo iyagu caadaystay in ay ku talaabsadaan falkasta oo raali galinaya dawlada Itoobiya, si ay u aqoonsadto maamulkaas ismagacaabay.
Soomaali waa wiil iyo abtigii, horaana loo yidhi (Ajji Haygu Haybsan), waxaana haboon in la ogaado in aynu nahay ul iyo diirkeed , dadkuna aanu kala maarmin, lana xusuusnaado in sheeko kasta taariikhi ka hadho, oo ay maalmuhu sumadaysan yihiin, nin walibana wuxuu dhitaysto dhamayo.
Dadweynaha Hargeysa ku sugana waxaan ku boorinayaa in ay arrimahan fiiro gaar ah u yeeshaan waayo waa dhacdooyin aayatiinka u daran iyaga, waxaana hadda lawada ogsoonyahay dhibaatooyinka aflagaadada iyo caga juglaynta isugu jira , ee lagu hayo dadka ka soo jeeda (Ogaadeeniya) ee ku sugan Hargeysa .
Laascaanood oo maanta si weyn looga xusay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday magaalada sanad ka hor .
Qaar ka mid dadkii isugu soo baxay mudaaharaadkii maalinta "Riyaale Carar".
Laascaanood,Somalia,07 December 2003 �Waxaa maanta isugu soo baxay wadada weyn ee dhex marta magaala madaxda gobolka Sool boqolaal qof oo isugu jira rag,dumar iyo caruurba,kuwaasoo socod dheer ku soo maray meelo badan oo ka mid ah magaalada ugu danbayntiina,socodkooda ku soo gebegebeeyey gurigii dagaalka ba,ani uu ka dhacay ee xiligii uu yimid Riyaale iyo ciidankiisu lagu soo dejiyey.
Dhacdadaas oo ku beegnayd maanta oo kale sanad ka hor,waxa Riyaale oo aan habayaraatee wax casuumaad ah aan ka helin odayaasha iyo madaxda gobolkaasi,uu si lama filaan ah,kadib socod dheer oo uu ka soo qaaday habeen badhkii magaalada Hargeysa uu ku soo galay magaalada,taasoo sababtay in dad badanina dhintaan,in kaloo badanina ku dhaawacantay,kadibna uu Riyaale iyo ciidankiisii si hal haleel ah ay uga baxaan magaalada.
Xuska maalinta "Riyaale Carar".
Isu soo baxaas oo ay ka hadleen odayaal iyo waxgarad badan oo ka tirsan dadka ku dhaqan magaaladaas ayaa waxay ku booriyeen dadka in la ilaaliyo nabadgelyada,isla markaana sida caadadu u ahayd dadka soomaaliyeed la soo dhaweeyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo nabada jecel,lalana jihaado qof kasta oo isku daya inuu colaad dhex dhigo dadka walaalaha ah ee ku dhaqan gobolada waqooyi ee dalka.
Mudaharaadkan ayaa waxa soo qaban qaabiyey urur la magac baxay Ururka Indheergaradka Nugaal Godan.Pr Sanjab oo ka mid waxgaradka gobolkaas ayaa isaga oo tilmaamaya sida shacabka deegaankaasi ay weligoodba u difaaci jireen midnimada umada soomaaliyeed,ay had iyo goorba ay diyaar u yihiin inay naftooda iyo maalkoodaba u huraan difaaca dhulkooda.
Cabdiraxmaan Axmed Hassan(Sayn)
Sawirka riix si aad u akhrisato wararkii Laascaanood online ee dhacdadaas(07-12-02)
Iyo Maalinkii xigtay(08-12-02)
Iyo weliba intaanu soo gelin magaalada(06-12-02).